Wireless Network လုပ်ချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
Wireless Network လုပ်ချင်လို့
August 2007 edited May 2009 in Networking
ကျွန်တော် အိမ်က စက် ၂ လုံးကို wireless ချိတ်ချင်တယ်..
အပေါ်ထပ်နဲ့ အောက်ထပ်ချိတ်ချင်တာ.. :39:
internet စက်နှစ််လုံး စလုံး သုံးလို့ရအောင်လည်း လုပ်ချင်တယ်..:D
August 2007 edited August 2007 Registered Users
Blue Tooth နည်းကို သုံးပါလား .. သိပ်မသိဘူးနော် .. နည်းနည်းပဲသိတယ် .. Home ဆိုရင် Wireless
နည်း ထဲက သိတာပြောပြတာ...
August 2007 edited August 2007 Administrators
Blue Tooth က ဘယ်လောက်ထိရလဲ... အပေါ်ထပ်နဲ့ အောက်ထပ်.. ပေ ၂၀ လောက်ရှိတယ်... ကျွန်တော်ကြားဘူးတာက Blue Tooth က အကျယ်ကြီးမရဘူး... ၁၀ ပေ အများဆုံးလားမသိဘူး..
wifi သုံးရမှာလားမသိဘူး.. ကြားဘူးတာ.. စျေးဘယ်လောက်လဲ သိချင်လို့.. စျေးသက်သာရင် ချိတ်မလို့..
တစ်ခြားနည်းတွေတော့ မသိဘူးဗျ။ ကျွန်တော့ဆီမှာ wifi ရတဲ့ router တစ်လုံးရှိတယ်။
မိုဒမ်က network ကြိုးကို router က WLAN မှာတပ်လိုက်တယ်။
Router configuration ကို ISP ကပေးထားတဲ့ ip, subnet mask ပေးလိုက်တယ်။
WiFi ကို enable လုပ်တယ် (security ပိုင်းကို ဘာမှမလုပ်ဘူး open လုပ်ထားတာ ... WEP တွေ သုံးလိုက်ရင် signal strength ကျသွားတယ် speed လည်းကျသွားတယ်)
DHCP ကို ပါ enable လုပ်ထားလိုက်တယ်။
ကျွန်တော့ Desktop က Wifi ရတယ် (IP ကို automatic assign လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်) သုံးလို့တော့ ရနေတယ်။
ကျွန်တော့ router က G လား B လားတော့ မသိဘူး။ N ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ Strength လည်းကောင်း speed လည်းကောင်း (ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းသုံးတာ ၂၃၀ Mbps ရတယ်)။ ထားတာက အောက်ထပ်မှာ ကျွန်တော့ ကွန်ပြူတာက အပေါ်ထက် အနည်းဆုံး ပေ ၄၀ လောက်ေ၀းတယ်။
အဲဒီလိုသုံးနေတယ်။ ခုတော့ wireless နဲ့ ၃ လုံးလောက် သုံးနေတယ်။ ကျွန်တော့ router က linksys (မော်ဒယ် မမှတ်မိဘူး) လက်ဆောင်ရထားတာ။ ၅ သောင်း ၆ သောင်း လောက်တန်တယ်ပြောတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း motherboard မှာ Wifi ပါတာတွေတွေ့တယ်။ wireless NIC ကတော့ ၄ သောင်း ၅ သောင်း ရှိတယ်ပြောတာပဲ။ စျေးတွေကတော့ အသေအချာမသိဘူးဗျ။
လူသစ်ကတော့ ၀ိုင်ယာလက်ရူတာလေး မီးဖွင့်၊ ကွန်ပြူတာက ကော်နက်ရှင်းဟာတွေ အော်တိုမှာထား၊
စက်တလုံးမှာ ရီစီဗာလေး တပ်၊ နက်၀ပ်ရှာတွေ့ရင် ဆက်၊ အဲ့ကွန်ပြူတာထဲက ၀ိုင်ယာလက်နက်၀ပ် လုပ်ချင်ရင် ဆိုတာလေးကို တဆင့်ချင်းလိုက်လုပ်၊ သူပေးတဲ့ဟာလေးကို ဖလော်ပီဒစ်ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်ထည့်၊ နောက်ထပ် ဆက်ချင်တဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ သွား ရမ်း၊ (( တုံ )) ဆို ပြီးသွားတာပဲ။ ဟဲဟဲ
တတ်လွန်းလို့တော့ မထင်နဲ့။ မတတ်လို့ ရှောက်လုပ်ရင်းဖြစ်သွားတာ။
စျေးကတော့ လူသစ်ဟာက ၀ိုင်ယာလက် ရူတာသက်သက်၊ ရီစီဗာ သက်သက်၊ စုစုပေါင်း ၆၀၀၀၀လောက်ကျမယ်ထင်တယ်။
ေ၀းရင်၊ အကာအကွယ်များရင် ကျလာမှာပဲ။ ဒီတော့ အပေါ်ထပ်၊အောက်ထပ် ဆင်ချင်ရင် ကြမ်းပြင်ကို အပေါက်ဖောက်ထားတာ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ သိတ်လဲမကျယ်စေနဲ့၊ လူပြုတ်ကျအုန်းမယ်။
တော်တို့ဆီမှာတော့ wireless router တခုကို modem output မှာခံလိုက်ရင်ကိုယ်သုံးချင်တဲ့စက်မှာ wireless card / adaptor ရှိနေရင်ရပြီဗျ..ခုသုံးနေတဲ့ဟာဆိုပေ၁၀၀လောက်ကတော့အသာလေးဖမ်းမိတယ်..
linksys wireless-G broadband router , U$ 50၀န်းကျင်လောက်ရှိမယ်...ဒီမှာတော့ laptop ရှိရင် အင်တာနက်ချိတ်စရာမလိုဘူးဗျာ...ကြိုက်တဲ့တိုက်ခန်းတွေအောက်မှာခိုးသုံးလို့ရတယ်..security password မပေးထားတဲ့ signal တွေဆိုချိတ်လို့ရတယ်လေ..:))
သိဘူးဗျ ... ကျွှန်တော်လဲ အခုမှ Netwroking ပိုင်းကိုလေ့လာမလို့ ခြေလှမ်းပြင်နေတုန်းပဲ.
ဘာစာအုပ်တွေကိုလေ့လာရမှာလဲ သိဘူး ..
Wireless Networking နဲ့ပတ်သက်ပြီး
ကနေဒါနိုင်ငံ University of Calgary ကွန်ပျုတာ သိပ္ပံအတန်းမှာ
CPSC641 ဆိုပြီးသင်နေတဲ့ သင်ခန်းစာ ဖိုင်တွေထဲကပါ ... Microsoft PowerPoint ဖိုင်တွေ ဖြစ်ပါတယ် ...
IEEE 802.11 , Bluetooth စတာတွေအတွက် ရှင်းလင်းချက်တွေ အားလုံးပါ၀င်ပါတယ် ...
ဆလိုက် အချပ်ရေ စုစုပေါင်း 200 ကျော်နဲ့ သေသေချာချာ ရှင်းပြထားပါတယ် ...
သူများနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်တွေက သင်ခန်းစာတွေ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကိုပါ တစ်ခါတည်း သိသွားနိုင်တာပေါ့
သူတို့ဆီမှာ 2.5 weeks သင်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးပါ ဒါပေမယ့် လျော့တွက်လို့တော့ မရဘူးဗျို့ ...
Wireless Network က စံသတ်မှတ်ချက် IEEE standard 802.11 ပါ။ www.ieee.org မှာ standard တွေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
802.11b = 11 Mbps to 22 Mbps
802.11g+ = 115 Mbps to up to 115 Mbps ရှိတယ်တဲ့။
သူငယ်ချင်းစေတန်ဂေါ့ က စက်နှစ်လုံးလောက်ပဲ ၀ိုင်ယာလက် လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ bluetooth wireless adapter လောက်ပဲ စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့။ USB port မှာ တပ်ရတာလေ။ utility software ပါ တစ်ခါထဲပါတယ်။
Transmission distance က တော့ ၁၀ မီတာ ကနေ မီတာ ၁၀၀ အထိလောက်ပဲတဲ့။ အမြန်နှုန်းက တော့ 1 Mpbs ၀န်းကျင်တဲ့။
နောက်ပိုင်းအသစ်ပေါ်တဲ့ ဟာတွေကတော့ ပိုလဲမြန်သလို စျေးကလဲ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
Connection တစ်ခုကို bluetooth device7ခု လောက်ပဲ ရမှာပါ။
ကွန်ပျူတာ ခုနှစ်လုံးပေါ့လေ။ ဒီထက်ပိုချိတ်ချင်ရင်တော့ Wireless Access Point သုံးလေ။
သားသားတို့ သုံးဖူးတဲ့ စက်ပစ္စည်း အတော်များများက တရုတ်ပြည်မက လာတာလေ။
တစ်ချို့ စျေးသက်သာတဲ့ bluetooth wireless adapter တွေက connection နဲဲ့ performance သိပ်မကောင်းလှဘူး။
သက်သက်သာသာနဲ့ အဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင် network ကြိုးနဲ့ ပဲ ချိတ်လိုက်ပါလား။ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပဲမဟုတ်လား။ Wire က Wireless ထက် ပိုပြီး စိတ်ချ မြန်ဆန်ပါတယ်။
Fast Ethernet လို့ ခေါ်တဲ့ သားသားတို့ အခု သုံးနေတဲ့ wire network က 100 Mbps နော်။
နှစ်လုံးထဲဆိုယင် router မလိုဘဲ WiFi နှစ်ကဒ်သုံးပြီး ချိတ်လို့လဲ ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် USB Wifi adapter သုံးပေါ့။ MSI ကထုတ်တဲ့ဟာကို ၅ သောင်းခွဲလောက်နဲ့ ၀ယ်ဖူးတယ်။ တစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ။
ဘယ်နည်းပဲသုံးသုံး ကွန်ပျူတာနှစ်လုံးစလုံးမှာ wifi ရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ windows မှာ ပါတဲ့ wireless networking wizard သုံးယုံနဲ့ ad-hoc network (access point မလို) ချိတ်လို့ရပါပြီ။
အခု Vista နဲ့ XP ကို ရိုးရိုး ကြိုးနဲ့ ပဲချိတ်တော့မယ်..
XP နဲ့ XP က ချိတ်လို့ရတယ်..
Vista နဲ့ XP ကတော့
Vista က XP ကိုသိပြီး...
XP က Vista ကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်..
XP က Share ပေးထားတာတွေကို Vista က ယူသုံးလို့ရတယ်..
Vista က Share ကိုတော့ XP က သိဘူး.. :106:
firewall ကြောင့်များလားဗျာ Vista ရဲ့ firewall ကို ပိတ်ပြီး စမ်းကြည့်ပါလား...
My network place မှာ မပေါ်တာဆိုယင် Explorer ရဲ့ address bar မှာ [URL="file://\_\_ipaddress"]\_\_ipaddress[/URL] လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး စမ်းကြည့်ပါလား။ ကိုယ်ချိတ်မယ့်စက်ရဲ့ ip ထည့်ပေးကြည့်ပေါ့။
Vista နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ XP ကသာ သိနိုင်တော့မယ်..
Linux လည်း vista ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း update ဖြစ်တဲ့ linux မှ ရတော့မယ်..
Vista က XP ကို သိနေပြီး၊ XP က Vista ကိုမသိတာက XP အခြေခံထားတဲ့ ကွန်ပျုတာတွေမှာ "Link-Layer Topology Discovery (LLTD) Responder component " ကို ထည့်သွင်းမထားရင် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် Vista မှာသုံးထားတဲ့ Network Map ပရိုဂရမ်က LLTD ကို အသုံးပြုထားပြီး XP စက်တွေမှာ မရှိလို့ ဒီပြဿနာ ဖြစ်တာပါ Network Map ပရိုဂရမ်က LLTD ရှာဖွေရေး Protocol ကို အသုံးပြုပြီး ကွန်ရက်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ၊ ကွန်ပျုတာတွေကို ရှာဖွေ စစ်ဆေးပါတယ်.. အဲဒီမှာ အရင်စနစ်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ XP စတာတွေမှာ အဲဒီ Protocol က မရှိလေတော့ Vista ကို မသိတဲ့ ပြဿနာ ပေါ်လာတော့တာပါပဲ အဲဒီအတွက် MS က XP အတွက် Update လုပ်နို်င်တဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲ ပရိုဂရမ် ထုတ်ပေးထားပါတယ် WindowsXP-KB922120-v5-x86-ENU.exe ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးပါ အဲဒီဆော့ဖ်၀ဲလေးကို MS က http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4F01A31D-EE46-481E-BA11-37F485FA34EA မှာ Download ချခွင့် ပေးထားပါတယ် ဒါပေမယ့် မပေးခင်မှာ ထုံးစံအတိုင်း Genuine test လုပ်မှာမို့ XP Pirate version တွေအတွက် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး အဲဒါလေးကို Cracked လုပ်ပေးထားတာတွေလည်း တွေ့တယ် ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံပေး မန်ဘာ၀င်မှ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ရမယ် ဆိုတော့ လက်လျော့လိုက်ရတယ်ဗျာ REF-http://support.microsoft.com/kb/922120
ကျွန်တော်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်ပေးထားပါတယ်။ XP အစစ်သုံးနေတယ်လို့တော့ မထင်ကြပါနဲ့။ ကိုမင်းကျော်ဘလော့ဂ် ကနေ ခရက်လုပ်နည်း ရထားတာပါ။ ကျွန်တော့အတွက် မလိုအပ်လို့ install မလုပ်ကြည့်ရသေးပါဘူး။ file ကတော့ microsoft ကနေ ဆွဲထားတာပါပဲ။
September 2007 edited September 2007 Administrators
ကျေးဇူးပဲ.. အခု နောက် စက်က Linux အဓိက သုံးနေလို့.. နောက်မှ စမ်းရမယ်..
wireless ဆိုလို့ ပြောပေးကြပါဦး....wireless share ဘယ်လိုယူရမလဲ မသိလို့။ wire မ less တဲ့ဟာတွေလိုလဲ တခုကနေတခု \_\_ ---.---.---.--- အဲလိုလေးလုပ်ပြီး ယူလို့လဲမရဘူး...ဘယ်လိုယူရတာလဲ ပြောပြကြပါဦး။ အသေးစိတ်လေး ပြောပေးကြပါ...မွေးစကလေး မလို့.. :D..
ပညာမျှေ၀ ခံစားပေးနေသူများအားလုံးအား လေးစား ကျေးဇူးတင်လျှက်.......
ဒီမှာကတော ့wireless router ပဲသုံးကြတာများပါတယ်...summer ဆိုရင်ပူလွန်းတော ့အခန်းထဲမှာမနေနိုင်ဘူးလေ...အခန်းထဲမှာ router ကိုဖွင် ့ထားခဲ ့...latop ကိုpassword ရိုက်ထဲ ့...connect...ပြီးရင်...ok...ပြီးရင်လက်တော ့ကိုခြံထဲယူသွားပြီးတော ့...beer လေးသောက်ပြီးတော ့mz ကိုကြည် ့ပေါ ့.....:1:
ပေ ၅၀...၁၀၀လောက်တော ့မိတာပါပဲ...:39:..ကို ့networkကို password ပေးပြီးသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲ.. akstar ပြောသလိုခိုးသုံးတဲ ့လူတွေရန်ကရှောင်နိုင်တာပေါ ့:65:
wireless အရမ်းကောင်းတဲ့ technology ပါ ။။။။။။။။။ ကျွန်တော ဒီတော့ပစ်ကို တော့ ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မယ်နဲ့တူပါတယ် ဟဲဟဲ။။ ဘာလို့လဲဆိုတော ကျွန်တော့ လမ်းထဲမှာ ပိုက်ဆံအကုန်ခံ၊ မိဘအဆူခံပြီး wireless လုပ်ထားလို့ပါ။။။။။။။ wireless connect ယူမယ်ဆိုရင်
အရင်ဆုံး စဉ်းစားကမှာ က
( ၁) ဖိုင် ရှယ်လုပ်မှာလား
( ၂ ) အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ပါယူမှာလား
( ၃) Game ကစားမှာလား ပါ
( ၁ ) ဖိုင်ရှယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် 802.11 G
( ၂ ) အင်တာနက် ဆိုရင် 802.11 N
(3) Game ဆိုရင် Gaming Router လိုပါတယ်။။။။
N series က MIMO system ပါ ( multiple out put In put ) ပါ နည်းနည်းေ၀ရင် N series ကောင်းပါတယ်။ N Rouer သုံးရင် G Adapter လုံး၀မသုံးပါနဲ့ ။။။။။ အရမ်းကြောင်ပါတယ် ။
G Router သုံးရင် G Adapter သုံးပါ ။။။။ ကောင်းပါတယ်
Wireless B, G နဲ့ N တို့ တွေဟာ IEEE standard ခြင်း မတူသလို၊ Frequency ခြင်း မတူလို့ Speed Range ခြင်းလည်း မတူပါဘူး။
Wireless A လည်းရှိဖူးတယ် ထင်ပါတယ် (သိမ်မမှတ်မိတော့ပါ)၊ ခုတော့ မသုံးတော့ပါဘူး။
N Router ကို G Adapter နဲ့ သုံးရင် G ရဲ့ Speed ပဲရပါတယ်။ N ရဲ့ Full Capacity ကို မရပါဘူး။
ကျွန်တော် သုံးတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘယ်လိုကြောင်တာလဲ အတွေ့ အကြုံလေးနည်းနညး် လောက် ပြောပြပါဦး နောက်ကိုယ်ကြုံရင် အံသြမနေအောင်ပေါ့။
N series သုံးပြီး G Adapter သုံးရင် ရတာပေ့ါ။။။။။။။ ညီလေး internet conection ကို share ယူကြည့်ပါလား။။။။။။။။။ N series router သုံးပြီး G Adapter သုံးတာ N series ရဲ့ Link speed တော့ဘယ်ရမလဲညီရယ်။။။။ ဒါတော့ အကုန်လုံးသိပါတယ် ။။။။။ ကိုဆီမှာ လော့လော့ဆယ် G Adapter နဲ့ N Router နဲ့ connect လုပ်တာ လုံးမအဆင်မပြေဘူး ။။။။။ Linksys WRT45 G ဆိုရင် G Adapter နဲ့ အရမ်းကောင်းပါတယ် ။။။။။။ N series ရဲ့ range က G ထက် ကို Range တော်တော်များများပိုရတယ် ။။။။။။ ping ရတိုင်း connection မရဘူး ။။။။။။။ Linkspeed ver good ဖြစ်တိုင်း connection မကောင်းဘူး ။။။။။။ N series ရဲ့ အားနည်းချက်ကို fourm တွေမှာ ရှိပါတယ် ။။။။ WRT 300 N နဲ့ MIMO 300 M router နဲ့ဆိုရင် line outside မဖြစ်ရင်တောင် ပေ 150 အတွင်းကောင်းကောင်းမိပါတယ် ။။။။
ဒီလိုပဲ သစ်ရွက်ကလေးတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေ
B, G , M I tirple E standard ဘယ်လိုမတူတာလဲ ကိုယ်မသိလို့မေးတာနော်
ကျွန်တော် လောလောဆယ် N Router နဲ့ G Adapter သုံးတာ လက်ရှိမှာ ဘယ်လို Visible Error တွေ အခက်အခဲတွေ မတွေ့ရတော့၊ ဘယ်လို ပြသနာမျိုးတွေရှိသလဲ မေးမိတာပါ။
အစ်ကို ပြောသလို...ရှာရှာဖွေဖတ်ကြည့်ရဦးမှာပဲ။ :5:
ကျွန်တော့်ကို မေးလို့ကတော့ IEEE Site က Specification တွေကို Link တွေ ပေးလိုက်မှာ
ကျောင်းမှာ သင်ဖူးတဲ့ မတောက် တစ်ခေါက်လေး အရတော့ Frequency တွေ နဲ့ BandWidth တွေ
မတူဘူး လောက် တော့ သိဖူး မှတ်ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း Networking သမား မဟုတ်လေတော့ ကိုယ်တွေ့တွေ အသေးစိတ်တွေ ရှင်းမပြတတ်ပါဘူးဗျာ။ အစ်ကိုသိ ရင် သေ သေချာချာ လေးရှင်းပြပေးပါလား။ အားလုံး လည်းဖတ်ရတာပေါ့။
IEEE က Standard သတ်မှတ်ပြီးသားပါ ။။။။။။
wireless soe 802. xxx
Fiber soe 802. xx
Ethernet soe 802.xx
IPX SPX soe 802.xx
ကိုယ်မေ့နေလို့ပါ သေချာပြန်ဖတ်ပြီး ပြောပါမယ်
ရဘူးဗျို. download လို့ .........
k.l.t wrote: »
ကျနော်လုပ်ကြည့်တာတော့ ရတယ်ဗျ။ ဒီမှာ ပြန်တင်ထားပေးတယ်။
တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာ ရှာရှာဖွေဖွေပေးတဲ့သူကို ကျေးဇူးအထူး
IEEE 802 Specification
802.2 Logical Link Control ( LLC )
802.3 Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection ( CSMA/CD ) LANs (Ethernet )
802.6 Metropolitan Area Network ( MAN )
802.9 Integrated Voice and Data Network
802.12 Demand Priority Access LAN, 100 Base VG-Any LAN
Just for knowledge sharing
ကိုစေတန်ရေ အဲဒါ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းဆိုင် မဖွင့်ခင်ညက ကျနော်ခေါင်းကိုက်ရတဲ့ ပြဿနာဗျ။ ည ၂ နာရီရှိနေပြီ မရသေးဘူး။ Vista ချင်းကို မရတာ။ Username, Password ထဲ့လဲမရဘူး။ Google မှာ ရှာတော့လည်း Vista ရဲ့ File sharing မှာ NTLM protocol သုံးထားလို့တဲ့။ Previous OS တွေနဲ့ သုံးချင်ရင် ဒီ Registry Tweak လေးလုပ်လိုက်ပါတဲ့။
HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Control\_Lsa မှာ LmCompatibilityLevel (DWORD) မပါရင် Create လုပ်ပါတဲ့။ ပြီးရင် Value ကို 1 ထားလိုက်ပါတဲ့။ ပြီးရင် restart လုပ်ပါတဲ့။ အဲလိုလုပ်ပြီးတော့ Vista ချင်းတော့ရသွားတယ်။ uname, pw မတောင်းတော့ဘူး။ အစက Password Protect Sharing ကို Off ထားတာကို လာလာတောင်းနေတာ။
ဒါပေမယ် Server 2003 နဲ့ကရသေးဘူး... ဒါနဲ့ရှောက်ကလိလိုက်တော့ မှတ်တော့မှတ်မိတော့ဘူး Vista မှာ Share Permission မှာလား၊ NTFS Permission မှာလား Everyone အတွက် Permission မပါဘူးဗျ။ ကျနော်လဲ Security သိပ်အရေးမကြီးတာနဲ့ Everyone ကို ထည့်ပြီး Full Control ပေးလိုက်တယ်။
အဆင်ပြေသွားတယ်။ ခုကိုစေတန်ဖြစ်နေတာ အဲလိုပဲထင်ပါတယ်။ ရသွားပြီလားတောင်မသိဘူး။
အနော်က မွေးစကလေးဆိုတော့ ဘာမှမသိဘူးလေ....အဲ့ဒါ အနော့််ကို Wireless Networking နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်.....ဘာတွေလေ့လာရမလဲ....ဘာတွေဖတ်သင့်သလဲဆိုတာတွေပေါ့နော်.......
Hay Admin Sayargyi myar..
Why you not teach the Wireless Networking in MZ Education Site ..
I would like to Suggest that you must put the lessons on MZ Edu.. So everyone can learn there and Nowadays, the whole world is using with Wireless Technology such as 3G, 802.11 or wifi .. etc. So we our Myanmar people should know something about what is wireless .. at least if they don;t use or they should know something about that..
hi all of my bro/ sis
in our house , there is one wireless signal that 70 fts away from my room.
but i can't get that signal.
so how can i get that signal?
please help me to get.
tuntunmin1981 wrote: »
Is you wireless router support Wireless-N mode ? If yes, try it with N mode.
There is several things to be considered.
1st is line of sight. If there is several walls (or) solid wall separating between you and wireless router ( or ) AP , you wont able to detect the wireless even though you are not too far from it.
Try to move your laptop nearer to wireless router / ap and check where you can detect it from. Try to change Wireless Mode to 'Wireless-B Only' (or) 'N Only' and see whether it works for you.
2nd is Attenuation. If there is other devices which is using wireless technology such as microwave, cordless phones might be interfering you wireless signals. Change your 'Channel'. By default it might be 11. Try to swift it to '6' .
Line Fee = 1500 FEC
Monly Fee = 130 FEC
Annual Fee (နှစ်စဉ်ကြေး) = 60 FEC
Red Link က Wi Fi ပေးပါတယ်။ မြရိပ်ညို မှာ ရှိပါတယ်။
ပြီခဲံ့ Friday, Satursday, Sunday သုံးရက် ပြပွဲ မှာ promotion လုပ်သွားတယ်လေ။
ပြပွဲမှာ Line ၀ယ်တဲ့ သူဆိုရင် 1 month (monthly fee FREE)
Line Fee = 1500 FEC (Co operate )
ပြပွဲမှာ Line ၀ယ်တဲ့ သူဆိုရင် 1 month (monthly fee FREE) ကျွန်တော် သိသလောက်လေးပါ။